Best Iziko yodongwe kunye Senga Company - XTL
I-Alomina Ceramic Crubible
I-Alomina Ceramic Tube / umbhobho / i-rod / roller
I-Alomina Ceramic Palm
Inxalenye ye-Alumina Ceramic
I-Alumina Ceramic Figstrate / iplate
I-alumina ye-ceramic disc
I-selicon carbide ceramic
I-Silicon Carbide Seal Iringi
I-Silicon carbide cube / umbhobho / i-rod / bar
I-selicon carbide ceramic plate
I-Silicon Carbide Beam
I-Boron Nitrode deramic
Inxalenye ye-ceram ye-PBN
Inxalenye ye-BN Ceramic
I-Silicon Carbide iMbulali
Igrafu esithe tyaba
Ikhaya > Iimveliso > I-Assay yeFumo > I-Clay Crubible
Eyona nqanaba eliphezulu lokuphela kwe-ceramic cray bakukisa i-Assay Deay Ascleds yeNkampani yeGolide yeGolide-ttl
Umgangatho waseTshayina woVavanyo loMlilo weMveliso kunye neFactory Magnesia Cupel yokuNyibilikisa uMvelisi weGolide | XTL
Best tho dust enyibilikisa ngokuyinyibilikisa, zwi ndiyabanyibilikisa Clay Iziko Manufacturers isitya igolide kunye platinum - Xngtailong
Ubushushu High Resistant Lab Fire Uvavanyo Clay Iziko for enyibilikisa igolide
Iziko yodongwe kunye Senga kuthelekiswa iimveliso ezifana kwi emarikeni, oko zinezibonelelo ebalaseleyo nanto ngokwemigaqo yokusebenza, umgangatho, inkangeleko, njalo njalo, kwaye uzakhele waziwa kakuhle market.XTL ishwankathela iziphene yeemveliso elidlulileyo, kwaye iyaqhuba ukuphucula kuzo . Incazelo ye ngokuyinyibilikisa yodongwe kunye Senga ungenziwa ngemfuneko ngokweemfuno zakho.
Iziko yodongwe kunye Senga isetyenziswa linabantu umthamo omkhulu amatye anqabileyo, njengegolide, isiliva, ubhedu, ibhrasi, Brass kunye nangaphezulu.
Iziko has a 80 uTroy oz. / 2.488 grams amandla wenziwe dust edidekile, unako ukumelana ubushushu ukuya ku-2500 ° F / 1371 ° C.
Iziko ingasetyenziswa nge kwiziko enyibilikayo igesi okanye itotshi yokunyibilikisa. A ephakeme Iziko umgangatho, ezenziwe ngodongwe kwii aphakamileyo zithathe iBanga tho Silica, ngokwandisa ubomi ukusetyenziswa Iziko. A Ebubanzini bodonga ukuba inzima ngaphezu kwezinye iintlobo ezifanayo (1/4 "- 6.4mm).
Le Iziko inokusetyenziselwa ukunyibilikisa ezilahliweyo isinyithi zibe etshe kwakunye ngokugalela isinyithi kwimisebenzi wax ngodongwe elahlekileyo ukuba zidle ukunceda umatshini castings.
Al2O 45% -55%
SiO2 38% -56%
1. High refractoriness, akukho ngokuhlaziya;
2. ukumelana Good nokudliwa ngumhlwa;
3. Good ukumelana kukothuka thermal;
4. Akukho ilenga abaseleyo, kungenwa nto, la manqaku kumazwe angasebenzisa amaxesha 3-5, oko isikhongozelo superduper for kulingwa umlilo.
Precious Analysis Metal
Iziko esetyenziselwa ilebhu
L.O.I (ilahleko kwi ucinezelo) 0,21%
Izinto eziluncedo Inkampani
Ixabiso: iimveliso zethu thelekisa kakuhle kunye nabanye abarhwebi.
Izixhobo: Thina umgca imveliso ngokupheleleyo kwakunye nezixhobo zovavanyo, kuquka umgca imveliso oluzenzekelayo.
Philosophy: Nge Obusemagqabini ubunjani, inkonzo firt-class, neshishini
Umgangatho: Siye kudlule IS0 9001: 2005. standard, ezinzile, ethembekileyo
* Umenzi Professional ukususela 1997.
* Control quality engqingqwa inkqubo zemveliso kunye nokunyamezelana.
* Mahala iisampuli ezikhoyo
* Imveliso ngentando yakho ngesisekelo umzobo yakho okanye iinkcukacha
* Delivery On-ixesha kunye nenkxaso ethembekileyo kunye nenkonzo
* Inventory ekhoyo ukuthunyelwa ekhawulezayo
* Sigcina yimfihlo yonke imizobo kunye noshishino ngolwazi phakathi kwethu.
Ingaba inkampani okanye umenzi?
* Singabantu manufaturer.
Ngaba ukunikezela iisampuli simahla?
* Ewe, singakwazi ukunikela isampuli free ukuba unayo kuyo imfuyo, kodwa umrhumo yekhuriya iza kuqokelelwa.
Ngaba uyasamkela imveliso elicwangcisiweyo ngokusekelwe zemigaqo yethu?
* Ewe, sinikezela OEM kunye nenkonzo ODM. Nje uthumele ukuba umzobo wakho ukuba unayo. Ukuba awunalo umzobo, xelela nje ukuba ingcamango yakho, siza kusebenza le kumzobo kuwe.
Ngubani ixesha delivery?
* Iintsuku ezisi-7 zomsebenzi yeemveliso eqhelekileyo iintsuku ezingama-30 ukwenzela iimveliso elungelelanisiweyo.
Ukuba uneminye imibuzo, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
I-Linying xing tai i-ceraramic c., i-ltd
Inombolo: +86 13975373343
Idilesi yenkampani: Indawo ye-henttan wemizi-mveliso, i-Linying, Hunan, 412200
Ilizwe / Ingingqi
Ishishini lomntu osemthethweni
Ixabiso lokuphuma lonyaka
Umgangatho wokugqibela we-ceramic yodongwe lodongwe Assay Deay Deay ngegolide xa kuthelekiswa neemveliso ezifanayo kwintengiso, umgangatho obalaseleyo ngokusebenza, umgangatho, inkangeleko, kwaye inandipha igama elihle emarikeni. I-Xingtailong ishwankathela isiphene seemveliso zangaphambili kwaye siphucule ngokuqhubekekayo. Inkcazo yemigangatho ephezulu yomgangatho we-ceramic cray dey asy deay ovelelayo kwi-spelation yegolide inokwenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno zakho.I-Assay Assay ye-Assay ineempawu eziphezulu kakhulu ekuchanyoni okuqhelekileyo ukunqanda phantsi kweemeko zexabiso lomlilo. Iinqaba zethu zisetyenziswa kwiilebhu yonke kwindawo yentengiso yamanye amazwe. Sineentlobo ngeentlobo zemilo kunye nobukhulu obufumanekayo ukuze zinikezelwe kwiinkcazo ezifunekayo.Ukubethelwa kwethu iinqaba zinika ubomi obude, ukukhawuleza ukunyibilika, isantya esihamba rhoqo, kunye nokungaxhathisi okhethekileyo kutshintsho olunogonyamelo.
I-7a 7A 8A Chini fir Liec Assay Assay i-Assia Chupel ye-cupel yegolide ethelekiswa neemveliso ezifanayo kwintengiso, umgangatho, inkangeleko, inkangeleko, njlnjl. I-Xngtailong ishwankathela isiphene seemveliso zangaphambili kwaye siphucule ngokuqhubekayo. Inkcazo ye-7A 7A 8A 8A Chin Firew Assay Demermed kunye ne-Magnesia ye-pumel ye-cupel yegolide inokwenziwa ngokwezifundweni zakho.I-Cupel yindawo yokuphononongwa kwe-porous yokufumana i-axide xa i-ash ivuthela ibhusi ekhokelayo. Elona candelo liphambili leMagnesia yi-magnenesium oxide, eyona nto ilunge kakhulu kwaye inokumelana nokukhukuliseka kwe-alkaline. Ukukhokela i-oxide yi-alkaline eyomeleleyo kakhulu. Kumaqondo obushushu aphezulu, ububele phakathi kwe-oxide kunye ne-silica yomelele kakhulu, enokuhlasela isibane kwiCupel. Kukho izityalo ezikwi-ash cupl kunye nesamente ye-cupel. Emva kokuvuthuza ngolu hlobo lweCuppel, kuya kubakho imiphongo kumphezulu weCupel, kwaye izinyithi ezixabisekileyo ziya kulahleka ngenxa yoko. Usebenzisa i-magnesia cupel, akukho phenomonon enjalo emva kokuvuthelwa ngu-Ash, umphezulu ugudileyo.
Wakhethwa zwi lomgangatho njengoko izinto, kudityaniswe umsebenzi processing phambili yodongwe, ubukhulu becala zisetyenziselwa platinum enyibilikisa, igolide, nesilivere, nobhedu kunye nenye iqondo lobushushu ingxubevange phezulu, ngobunyulu phezulu, anti-umhlwa, anti enamandla acid womelele kwealkali, lukhuni elungileyo, Njengokungeniswa high thermal nenkani. Icandelo eziphambili SiO2 ≥80%, Al2O3 (≤17%) kunye nezinye yi-3% (K2O, Na2O, Fe2O3), Akukho sihlwahlwaz emva amaxesha 10 ubushushu ngesiquphe nengqele ngesiquphe ngo 1100 ℃ ⇌ 20 ℃, yaye akukho ufa emva kwamaxesha 10 esebenzisa oxygen ukusika umpu ukutshiza 1700-1800 ilangatye leli ngokuyinyibilikisa.Tho Iziko yokunyibilika dust, zwi ndiyabanyibilikisa Clay Iziko Manufacturers isitya igolide kunye platinum kuthelekiswa iimveliso ezifana kwi emarikeni, oko zinezibonelelo ebalaseleyo nanto ngokwemigaqo yokusebenza, umgangatho, inkangeleko, njalo njalo, kwaye unobuhlobo igama elihle emarikeni. Xngtailong lushwankathela iziphene yeemveliso elidlulileyo iyaqhuba ukuphucula kuzo. Incazelo ye ngokuyinyibilikisa yokunyibilika tho dust, zwi ndiyabanyibilikisa Clay Iziko Manufacturers isitya igolide kunye platinum ungenziwa ngemfuneko ngokweemfuno zakho.
crucibles zethu kulingwa umlilo ubomi elide, ngokukhawuleza ukunyibilikisa, isantya ukunyibilika rhoqo kunye nokumelana nengaqhelekanga utshintsho ubundlobongela lobushushu.
I-5G / 20G / 30G / i-40G / i-50g / i-55g / 65G / i-65g / 75G Laboratory Ceray Churay
I-5G / 20G / 30G / i-40G / i-50G / i-50g / i-55g / i-65g / i-65g / i-6g / i-65g / i-65g / 75G / 75G okanye i-Slag, akukho sikhonkwane, akukho sikhonkwane.
kwizinga eliphezulu Imfono enyibilikisa igolide kulingwa umlilo ngokuyinyibilikisa zeelebhu kulingwa yorhwebo
ubukhulu Fire Uvavanyo Iziko: 5g / 20g // 30g / 40g / 45g / 50g / 55g / 65g / 75g kunye kwendoda yesi-8 / No.8.5 / 9 / No.9G / No.9.5 crucibles ezi avaivalbe yaye simenza customzied ubukhulu. iisampuli sikhululekile avialable for test
I-Ceramic Clay Fill Assay Crubible kwi-lab yegolide yokunyibilika kunye nohlalutyo lwesinyithi oxabisekileyo
Iinyibiba ezihlaziyiweyo emfazweni emfazweni zizixhobo ezivela kwi-fusion yendawo ye-Areay, ngegolide i-Ficrees ye-Assay indala, kodwa isezantsi kakhulu Iindlela ezinokuthenjwa ze-ASESS
I-55G yomlilo Assay Cruble ukunyibilika-tl
Ezi crucibles kulingwa umlilo zibonelela ukhukuliseko ngokuhlaziya ukuxhathisa phantsi kweemeko ezinzima (ukuya 1300ºC). Universal Fire Uvavanyo Crucibles lingayivelisi ubomi elide, fusion ngokukhawuleza, isantya ukunyibilika rhoqo ukuxhathisa umothuko thermal.Nesixhobo yokwakha umgangatho ophezulu umlilo eliyinjubaqa udaka umxholo alumina ophezulu ebenza ukumelana ukuhlasela litharge.